JINGHPAW KASA: နမ့်တိန်ချောင်းဖျားတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) နယ်မြေဖြစ်သော ဖားကန့်ဒေသ နမ့်တိန်ချောင်းဖျား မုန်ဂါရွာဟောင်း ဖလပ်ချောင်းတွင် အောက်တိုဘာ (၉) ရက် နေ့လည် (၁၂း၄၀) နာရီ အချိန်တွင် ကေအိုင်အေတပ်ရင်း (၆) လက်အောက် ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ခွဲ (၄ နှင့် ၇) နှင့် စစ်အစိုးရ စစ်တပ် ခလရ (၃၈၁)၊ (၃၈၂)၊ (၃၀၉) များမှ အင်းအား (၂၀၀) ကျော်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤတိုက်ပွဲတွင် စစ်အစိုးရဘက်မှ မေဂျာ တစ်ဦး ခြေထောက်တွင် ဒဏ်ရာရရှိပြီး၊ နောက်မေဂျာ တစ်ဦးက မျက်စိတွင် ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းနှင့် စစ်သား (၄) ဦးသေဆုံးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ နေ့လည်ပိုင်း (၂း၁၅) နာရီ ခန့်တွင်လည်း ဤစစ်အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် ယုန်တောင် တွင် ဆက်လက် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ဤတိုက်ပွဲတွင်လည်း စစ်အစိုးရဘက်မှ စစ်သား (၂) သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
There were4Burmese soldiers killed and 1 Major wounded on the leg and another Major wounded in eyes, according to the KIA front-line report. More than 200 Burmese soldiers light infantry unit (381), (382) and (309) invaded at the KIA (2) brigade area, near the Hpa kant region, the upper Nam Tein river, Old Mungga village and near the Hpa Lap river on 9th October. Thus the KIA patriotic under (6) battalion of People volunteers’ company (4) and (7) opened fire to prevent the invaded Burmese troops at 12:40 PM. Moreover, there wasabattle between again with the same troops in the Yung Tawng region at 02:15, and (2) Burmese soldiers killed.
sha rut lung wa ai myen sa wa ni hpe gawt kau na matu myit rum niantsa karai kasang atsam jaw ya u ga .
dai daw du said...
မကောင်း ဆိုးဝါး ကောင် တွေကို အမြစ်ပြက် တိုက်ခိုက် အောင်မြင်ချင်း ခွန်အား k.I.A အပေါ် အဖ ဘုရားသခင် အမြဲ ကောင်းချီး ပေး ပါ စေ။
Sengmaw ga na hka mawru ni e..grau sung ai shara grau manu ai shara du jang Dumbut ndum tim, Mu hte gung ngu nna mawru kaba hte agraw p jaw u law.
ုKIA ဖက်ကဘုရားသခင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဗျ ဒါကြောင့် KIAမသေတာပေါ့ ဘာမှနားမလည်ပဲမပြောပါနဲ့ ကို Phwne Soe